Umhlaba - uwukuphela kweplanethi esimisweni sethu sonozungezilanga lapho izinto eziphilayo. Ezicini eziningi uphromothiwe khona kwakhe amagobolondo eziyisithupha ezahlukene: emkhathini, hydrosphere, uHlu Jikelele Lwamakheli, lithosphere, futhi pyrosphere tsentrosfery. Bonke oxhumene Ukubambisana eduze, okuyinto waveza in exchange of yamandla nezinto ezisebenza. Kulesi sihloko sizohlola isakhiwo sabo, izici eziyinhloko futhi izakhiwo.
igobolondo eMhlabeni yangaphandle - kungcono emkhathini, hydrosphere, lithosphere.
I imvilophi gaseous Zomhlaba - emkhathini, ezansi ke elisemngceleni ne hydrosphere futhi lithosphere, luqhubeke kuze kube km 1,000. Kuyo kukhona izingqimba ezintathu: iThrojani efaka isimeli seseva, okuyinto ihamba; ngemuva kuba Stratosphere; kulandele - ionosphere (ungqimba engenhla).
Ukuphakama iThrojani efaka isimeli seseva --10 km, kanye nesisindo - 75% ngo-mass umkhathi. Kwenzeka emoyeni ezihambayo ngendlela evundlile noma mpo. Ngenhla iyona Stratosphere, ezisabalele 80 km komfula. It yakha endwangwini, ezihambayo ohlangothini ovundlile. Eminyakeni Stratosphere kukhona ionosphere, okuyinto ionizes njalo emoyeni.
hydrosphere Usayizi - Earth igobolondo aqueous kuyinto 71% surface yomhlaba. Isilinganiso usawoti namanzi - 35 g / l. ebusweni Oceanic lunesibalo ngu-1 kanye lokushisa 3-32 ° C. Kanti futhi le misebe yelanga akwazi ukungena kungekho lishonile kunesikhumba amamitha angamakhulu amabili UV - 800 m.
Ububanzi Indawo eziphilayo - the uHlu Jikelele Lwamakheli, ke okuhlanganisiwe ne hydrosphere, umkhathi lithosphere. Unqenqema engenhla uHlu Jikelele Lwamakheli antante engenhla amabhola iThrojani efaka isimeli seseva futhi aphansi ifinyelela phansi ayimigodi olwandle. Siqokomisa kwenkululeko izilwane (abangaphezu kwesigidi zinhlobo) kanye sphere izitshalo (angaphezu kuka-500 THS. Tinhlobo).
I ukushuba we lithosphere - itshe emhlabeni emgodleni zingahluka kusuka km 35 kuya ku-100. Lihlanganisa zonke amazwekazi, iziqhingi nolwandle phansi. Ngezansi pyrosphere ngaphansi kwaso, okuyinto igobolondo evuthayo iplanethi yethu. It is baphawula ukwanda amazinga okushisa ngokushutheka lesi cishe 1 ° C wonke amamitha 33 ezijulile. Kungenzeka ukuthi ngaleso ngaphansi kwethonya izingcindezi omkhulu futhi amazinga okushisa aphakeme kakhulu futhi amatshe oncibilikisiwe ukujula okukhulu kukhona esimweni eduze uketshezi.
Indawo igobolondo emaphakathi Zomhlaba - nengaphakathi - 1800 km ukujula. Ososayensi abaningi obusekela lo mbono ukuthi yakhiwa nickel nensimbi. It izingxenye lokushisa ayizinkulungwane eziningana degrees Celsius, futhi ingcindezi - 3000000 eziphindwe. isimo Nuclear ngenkathi hhayi kakhulu wafunda, kodwa siyazi ukuthi iqhubeka kuphole.
Geosphere igobolondo Zomhlaba njalo siguqula: somlilo - uqweqwe kanzima - sikhula. Le nqubo ngesikhathi esisodwa sokucasuka ukubukeka itshe amabhlogo okuqinile - amazwekazi. Futhi esikhathini sethu sphere evuthayo ithonya aligcini nje ukuphila emhlabeni. Igalelo eyaba nalo likhulu kakhulu. Kushintsha njalo wabuka amazwekazi, isimo sezulu, izilwandle, umoya kwengoma.
Endogenous futhi izinqubo exogenous kuthinte ukushintshashintsha okuqhubekayo we eqinile Zomhlaba, okuyinto ethatha phezu uHlu Jikelele Lwamakheli.
Zonke igobolondo sangaphandle Umhlaba enifana - ukuhamba okusezingeni eliphezulu, ngenxa okuyinto ushintsho kancane kunoma yiziphi lezi ngokushesha ukunweba kulo isisindo salo. Yilesi isizathu esenza ukuba homogeneity isihlobo of the ukwakheka nolwelwesi ngezikhathi ezahlukahlukene, yize beye zinguquko ephawulekayo phakathi ukuthuthukiswa umonakalo omkhulu kakhulu. Ngokwesibonelo, emkhathini, ngokuvumelana ososayensi abaningi, ekuqaleni kwakungekho-mpilo mahhala, kodwa ke ayegcwele -carbon dioxide. Futhi kamuva, ngenxa yokuphila isitshalo, litholakala isimo samanje. Ngokufanayo, ukulungiswa kanye aqueous igobolondo Ukwakheka Zomhlaba, okuyinto ukufakazela ngokuqhathanisa usawoti Ukwakheka izinkomba ivaliwe futhi ulwandle amanzi. Vele ushintshe ezweni organic lonke, namanje izinguquko zenzeka.
Podkopaev, MI inhlangano lefundo Izici Voice
Kubaluleka uhlelo ngokomthethosisekelo Russian Federation
I cap kuhlukile baseball? Izici headgear
Gabriel Tarde: Biography nesithombe
Uyini imilolotelo: definition. imilolotelo Russian nezindaba izingane
3 izizukulwane cephalosporins amaphilisi. 3 isizukulwane cephalosporins izingane